सलाम छ यि आमालाई ! साहशिक महिलाको महान कदम, संसारभर भयो चर्चित (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सलाम छ यि आमालाई ! साहशिक महिलाको महान कदम, संसारभर भयो चर्चित (भिडियो हेर्नुस्)
सलाम छ यि आमालाई ! साहशिक महिलाको महान कदम, संसारभर भयो चर्चित (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । एक महिलाले गरेको शाहसिक कामले अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको छ । श्रीमानको निधन पछि महिलाहरुको जिवनको हरेक रंग पनि खोसिने गरेको छ । श्रीमानका् निधन पछि हरेक महिलाको सिन्दुर पुछिन्छ, पोते पनि खोसिन्छ, यति सम्म सेतो लुगा समेत लगाइन्छ ।
जिवनमा रातो रंग समेत खोसिदा महिलाको जिवन वेरंग हुने गरेको छ । तर एक महिलाले पनि यस्ता सामाजिक कुरिती विरुद्ध शाहसिक कदम उठाएकी छन् । उनले श्रीमानका् निधन पछि घाटमा उनको अन्त्यष्टि पछि पनि सिन्दुर र पोते निकालिनन् । उनले भनिन्, म संस्कारले मान्दै आएको कुरा मान्छु । किरीया गर्नका लागि सेतो लुगा लगाउनुपर्छ त्यो लगाउँछु ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर मेरो श्रीमानले मलाई १२ वर्षको उमेरमा दिएको सिन्दुर र पोते म मेरो शरिरवाट कहिल्यै पनि निकाल्दिन । उनले घाटमा श्रीमानका् किरियाका लागि सेतो लुगा त लगाइन् तर शुिररवाट सिन्दुर र पोते निकालिनन् ।
मलाई मेरो श्रीमानले दिएको उपहार हो । म यो जिवन रहुन्जेल कहिल्यै निकाल्दिन उनले भनिन्, मलाई मेरो श्रीमानले पनि कहिल्यै ननिकाल्नु भन्नुभएको छ । उनलाई श्रीमानले नै निधन हुनु अघि आफुले लगाइदिएको सिन्दुर र पोते कहिल्यै ननिकाल्नु भनेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, म पक्कै अगाडी जान्छु होला ।
म गएपनि तैँले सिन्दुर र पोते कहिल्यै नखोलेस् भन्नुभएको छ । म किरिया गर्नका लागि सेतो लुगा त लगाउँछु तर यो सिन्दुर र पोते भने निकाल्दिन उनले सबैका सामु सुनाइन् ।
श्रीमती परपुरुषसंग रंगेहात भेटेपछि आफ्नो ६ वर्षीय छोरासहित मिडियामा आए सन्तोष (भिडियो)